Unezinkinga nge-Instagram? Lapha sikubonisa izixazululo
Inicio » Apps » Unezinkinga nge-Instagram? Lapha sikubonisa izixazululo
144 Ukubukwa 0
I-Instagram yasungulwa ngo-2010 nguMike Krueger waseSpain nomngane wakhe waseMelika uKevin Systrom. Njengamanje, inethiwekhi yokuxhumana nabantu iyimpumelelo emhlabeni wonke futhi isivele inabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingu-300.
Kulesi sihloko, sizokwethula izinkinga ezivame kakhulu ze Instagram kanye nezixazululo zayo. Bheka umhlahlandlela wethu ophelele nge-athikili engezansi.
Kule nkinga, silungiselele okokufundisa okukhethekile. Finyelela ngokuchofoza lapha.
Ngephutha, I-Instagram gcina ikhophi yesithombe ngasinye noma ividiyo eshicilelwe kuphrofayela yakho ngqo kugalari yezithombe ye-Android. Uma ngabe uhlelo lokusebenza lungawalondolozi amakhophi kudivayisi, kuzodingeka ukuthi uye kuzilungiselelo ze-Instagram futhi unike amandla imvume yokugcina izithombe namavidiyo.
Khumbula lokho isitoreji sangaphakathi sisengozini uma kwenzeka ukhetha ukugcina wonke amakhophi kudivayisi.
Landela indlela: Izilungiselelo ze-Instagram -> Izilungiselelo -> Gcina izithombe zangempela futhi Londoloza amavidiyo ngemuva kokuthumela. Sebenzisa zombili izinketho. Uma inkinga iqhubeka, qalisa kabusha uhlelo lokusebenza lwedivayisi yokwenza izinto eziningi bese uqalisa inqubo futhi.
Angikwazi ukususa iphrofayela yami ku-Instagram
Abasebenzisi abaningi abanayo inketho yokuphuma kumaphrofayili abo e-Instagram ngohlelo lokusebenza. Inketho "yokususa i-akhawunti" ayikwazi ukufinyelelwa ngohlelo lokusebenza lweselula, futhi itholakala kuphela enguqulweni yewebhu.
Kuhle ukukhumbula ukuthi inketho etholakala kuwebhusayithi ye-Instagram isusa i-akhawunti okwesikhashana hhayi ngempumelelo. Ukuze wenze lokhu, iya ekhelini elithi instagram.com bese ufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Lapho ufaka, chofoza igama lakho eduze kwenketho ethi "phuma", bese ukhetha inkinobho "hlela iphrofayela".
Kunketho "yokuhlela iphrofayela", thola incazelo ekhoneni elingezansi kwesokudla ukuze "uvale okwesikhashana i-akhawunti yami" futhi uchaze isizathu sokukhishwa esikrinini esilandelayo. Iphrofayela izohlala isebenza izinsuku ezingu-90, futhi i-imeyili ithunyelwa kumsebenzisi ngemva kwalolo suku exwayisa mayelana nokususwa okusebenzayo kwe-akhawunti.
Iphutha ngenkathi kwabiwa izithombe namanye amanethiwekhi omphakathi
Kungenzeka ukwabelana ngezithombe ezishicilelwe ku-Instagram kwezinye izinkundla zokuxhumana, njenge-Facebook ne-Twitter. Noma kunjalo, iphutha elingaziwa likhubaza ukwabelana ichazwa umsebenzisi futhi ayidlali okuqukethwe ngesikhathi esisodwa kwamanye ama-akhawunti axhunyiwe. Thola ukuthi ungayixazulula kanjani le nkinga ngezansi:
Ku-Facebook: Iya kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho (umcibisholo oseduze kwesithonjana sokukhiya ekhoneni eliphezulu kwesokudla), thola imenyu "yezinhlelo zokusebenza" bese ukhetha u-"x" ovela eduze kwesithonjana se-Instagram. Ngemuva kwalokhu kukhetha, ukufinyelela kwe-Instagram ku-Facebook ngeke kugunyazwe.
Ku-Twitter: chofoza isithombe sephrofayela yakho bese ukhetha inketho "yezilungiselelo". Kuzovela isikrini esisha futhi kufanele uchofoze "izinhlelo zokusebenza", sesha i-Instagram bese uchofoza "hoxisa ukufinyelela". Ngemuva kwalokhu kukhetha, ukufinyelela kwe-Instagram ku-Twitter ngeke kugunyazwe.
Buyela ku-Instagram, iya kokuthi "Izilungiselelo" ze-akhawunti yakho bese ukhetha inketho "Ama-akhawunti axhunyiwe". Chofoza kusithonjana se-Facebook noma se-Twitter bese unikeza ukufinyelela ekwabelaneni ngoshicilelo futhi ngokubonisa idatha yakho yokungena.
Izinkinga zokungena ngemvume ngenxa yokungathobeli izikhathi zesevisi
Imigomo yesevisi ayifundi njalo abasebenzisi, kodwa kwezinye izimo ukuphulwa kwemibandela ethile kubangela umphumela ukuvalwa kwe-akhawunti ngokwephula imigomo nemibandela yesevisi.
Ngakho-ke, lapho ubhekene nezinkinga zokungena ngemvume, khetha okuthi "Ukhohliwe?" bese usetha kabusha iphasiwedi yakho yokufinyelela.
Ezimeni zokususwa kokuqukethwe okungalungile, Instagram izophendula nge-imeyili ezenzakalelayo ebonisa isikhathi sokungasebenzi kwephrofayili noma, ezimeni ezibucayi kakhulu, ukuvalwa ngokuphelele kwe-akhawunti.
Kuhle ukukhumbula ukuthi umsebenzisi ngeke akwazi ukungena nge-imeyili efanayo noma igama lomsebenzisi uma kwenzeka exoshwa ngokwephula imigomo yesevisi.
I-Instagram ngeke ithuthukele enguqulweni yakamuva
Inguqulo ye-Instagram iyahlukahluka ngokuya ngedivayisi ngayinye, futhi lokhu kuzoba nomthelela enanini lezinsiza ezitholakalayo kumsebenzisi ngamunye.
Abanye abasebenzisi bangase bangatholi izihlungi ezintsha noma izinsiza zokuhlela isithombe ngenxa yenguqulo ye-Android ekhona kudivayisi.
Kunamawebhusayithi ambalwa anikezela nge-APK yohlelo lokusebenza lokufakwa, njengoba kwenzeka nge-APK Mirror. Khumbula ukuthi ukusebenza kohlelo lokusebenza kungase kuthinteke kwezinye izimo, ngaphezu kweqiniso lokuthi ukufakwa kusengozini yomsebenzisi.
Khumbula ukuhlola ku-Google Play Isitolo uma ngabe i-Instagram efakwe kudivayisi yakho isebenzisa inguqulo yakamuva.
► Ungayisusa kanjani i-akhawunti ku-Instagram
► Ungasenza kanjani isiteshi se-IGTV ku-Instagram
Izithombe ezishicilelwe ezinokulungiswa okuphansi
Ungakwazi ukulungisa mathupha ikhwalithi yezithombe zakho ezishicilelwe ngokuqondile nge-Instagram, igwema ukucutshungulwa kwezithombe ezinesinqumo esiphansi.
Ukuze wenze lokhu, iya kuzilungiselelo ze-Instagram bese ukhetha "Izici ezithuthukisiwe" kanye "Sebenzisa ukucubungula isithombe sekhwalithi ephezulu", buyela emuva bese uvala uhlelo lokusebenza lwemisebenzi eminingi kudivayisi yakho.
Izithombe ezilandelayo zizocutshungulwa ngekhwalithi ephezulu, nokho, ukusetshenziswa kwe-inthanethi yeselula kuzoba kukhulu. Uma kwenzeka ungenantshisekelo yokuthumela izithombe ezinokulungiswa okuhle, khubaza lesi sici.
Amawebhusayithi okulanda izinhlelo nezicelo mahhala
Izizathu ezi-5 zokuthenga i-hatch yakwaHonda City
Uhlelo lomndeni lwe-YouTube Premium: lusebenza kanjani nokuthi kubiza malini
Uyithumela kanjani indawo yami nge-WhatsApp
I-UmoBix: uhlelo lokusebenza lokulawula abazali lwe-iOS ne-Android
Ungayithola kanjani i-WhatsApp uma ngilahlekelwe yi-SIM khadi yami?